IFTIINKACUSUB.COM: juillet 2018
Maqalka dhagaha waxaa waayahan ku soo badanayay dilka caruur iyo hooyooyin, ay aabbayaashood ama adeerradood (stepfathers) sababaan. Nasiib xumo, dalalkan dibadaha ee aynu nimid, nidaamkooda caafimaad iyo kan is dhexgalka
Gabadh u dhalatay Somaliland ayaa waxa ay gaadhay wadamada Yurub qaar ka mida,kadibna waxa ay isku dhiibtay sheegatayna in ay kasoo jeeddo dhalasho ahaan Koonfurta Somaliya gaar ahaan inta ku dhowdhow Muqdisho,
Kulan aan la shaacin isla markaana aan la sheegin waxa uu daaran yahay . Sawirro iyo suurado na tusinaaya in ay kulmeen Madaxwayne Biixi iyo Siyaasi Ismaciil Buubaa isla markaana ay ka muuqato yididiilo fiicani .
Waa goor kulayle ah ,malahayga kuma fiicne aqoonta cimiladee ma Kaliilbaa mooyi hadanay ahayna waa mid u dhaw , waana magaalada Paris ee cariga dalka Faransiiska, Kaliisha iyo kulaylka Faransiisku waa mid ka gadisan cimiladii carigeena .
Waxaa jiray nin ka mida mashaqaystayaasha Somalida ,ninkaasi oo lehaa caruur iyo xaas ay ka muuqato duruufta dhaqaale daridu,balse la qabatimay shaqo la'aanta xadka goosatay ee uu mudaba uu kusoo jiray